ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအရေပျော်ဝင်စေတဲ့ နည်းလမ်းများ.. - APANNPYAY
/ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအရေပျော်ဝင်စေတဲ့ နည်းလမ်းများ..
၄. ကျွန်တော့်ကို သင်က ချစ်တယ်ဆိုတာ သိအောင် လုပ်ပေးရင် ကျွန်တော်ကလဲ ပြန်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံး ချစ်မေတ္တာကို ခံစားချင်ပေမယ့် အချိန် ကြာလာရင် စစ တွေ့ခြင်းကလောက် မခံစားမိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မိန်းမဟာ ကျွန်တော့်ကို ချီးကျူးရမယ့် နေရာလေးတွေကို ရှာဖွေနေပြီး ကျွန်တော့်ကို သူမချစ်တာ သိစေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ကျွန်တော့်ကို လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးပြီး ချစ်ရည်လွှမ်းတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။
၄. ကြှနျတေျာ့ကို သငျက ခဈြတယျဆိုတာ သိအောငျ လုပျပေးရငျ ကြှနျတျောကလဲ ပွနျလုပျပါမယျကြှနျတျောတို့အားလုံး ခဈြမတ်ေတာကို ခံစားခငျြပမေယျ့ အခြိနျ ကွာလာရငျ စစ တှခွေ့ငျးကလောကျ မခံစားမိတော့ပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့မိနျးမဟာ ကြှနျတေျာ့ကို ခြီးကြူးရမယျ့ နရောလေးတှကေို ရှာဖှနေပွေီး ကြှနျတေျာ့ကို သူမခဈြတာ သိစပေါတယျ။ တဈခါတဈလမှောတော့ ကြှနျတေျာ့ကို လကျဆောငျလေးတှေ ပေးပွီး ခဈြရညျလှမျးတဲ့ အကွညျ့နဲ့ ကွညျ့နတေတျပါတယျ။